Wararka | Radio Himilo | Page 2
Home / Wararka (page 2)
02 Dec – Maalinta Caalamiga ee Cirib-tirka Addoonsiga
radio himilo December 5, 2017
Waxaynu nool nahay qarniga 21aad oo mid iyo qof kasta uu xor u yahay inuu sameeyo wuxuu ka helo; u dhaqmo suu doono; u noolaado suu doorbidayo. Waxaynu ka hadalnaa xurnimo hayeeshe dhab ahaan, dhamaan dadku ma wada ahan xor. ...
radio himilo December 4, 2017
Muqdisho – Ninka ayaa heerkii ugu xumaa ka gaaray maseyrka markii afadiisa uu ku jirdilay mar kasta oo sawirkeeda like la saaro, marka loo eego booliska Paraguay. Booliska Nemby ayaa sheegay inay xireen 32-jir-ka lagu magacaabo Pedro Heriberto Galeano kaas oo ...
Maalinta Caalamiga ee Xijaabka.
Muqdisho – Maalinta Caalamiga Hijaabka waa dhacdo sanadle ah oo maskaxdeeda ay ka timid Nazma Khan sanadkii 2013-ka. Munaasabadda ayaa la qabtaa kowda bisha febraayo sanad kasta. Waxaana la xusaa 140 dal oo dunida kamid ah. Ujeedka maalintan waa dhiirri-gelinta ...
Faa’iidada laga helo Babaayga.
radio himilo December 2, 2017
Muqdisho – Babaaygu wuxuu ku jiraa qudaarta ama cunnooyinka aadka loo jecel yahay oo maalinle inta badan bulshadu u cuni karto. Wuxuu kamid yahay qudaarta kuwa ugu raqiisan, qiimo ahaan, uguna qaalisan, nafaqo ahaan. Dadka intooda badan waxay cunaan xilliyo ...
Faa’iidada laga helo cunista Canabka.
Muqdisho – Canabku wuxuu kamid yahay qudaarta aadka u macaan oo dunida meelo badan laga cuno. Dad badan waxaa laga yaabaa inay kaliya macaankeeda ka helaan, hayeeshe aysan ogeyn faa’iidada ku duugan cunisteed. Haddaba waxaan kuu sheegi karnaa dhowr faa’iido ...
Muqdisho – Nin duurka kala yimid mas si uu xanaaneysto ayaa nolosha lagu cunay, marka loo eego booliska Thailand. Booliska degmada Kong Krailat ayaa sheegay in looga yeeray guri ku yaalla xaafadda Sukhothai si loo siiyo warbixin la xiriirta mas gebi ahaanba ...
1 December – Maalinta Caalamiga ee AIDS-ka.
Muqdisho – Kowda bisha December sanad kasta taniyo sanadkii 1988-kii, waa maalin caalami ah oo loogu dow-galay sare-u-qaadista wacyiga la xiriira cudurka dilaaga ah ee AIDS-ka kaas oo ku fidiya feyraska halista ah ee HIV-ga iyo in sidoo kale loo ...
Daawo – Carruurtaada wali Hadyad maku siisay inay Masjidka ku tukadaan salaadda Subax?!
Muqdisho – Koox carruurta Turkiga kamid ah waxaa lagu abaal-mariyay hadyado iyo baaskiilo maadaama ay Masjidka ku tukadeen salaadda Fajarka – kuwaas oo 40 saf buuxiyay. Hadyadda waxaa lagu siiyay Masjidka Sultan Selim ee degmada Iimaan oo katirsan caasimadda Istanbul, ...
Masjid gudihiisa Jimicsi loogu sameeyo da’da culus!
Muqdisho – Shanta waqtiga ee salaadaha – hal xirmo oo jimicsi ah waa mashruuc samafal ah oo koox ardayda dalka Turkiga kamid ah ay soo qaban-qaabiyeen. Mashruuca wuxuu isku keenayaa dadka da’da culus ee Masaajidda ku cibaadaysanaya oo ku nool ...
Muqdisho – Waa RW hore ee dalka Turkiga, Adnan Menderes. Intii u dhaxaysay 1950-kii iyo 1960-kii ayuu ahaa RW kaas oo saddex jeer oo xiriir ah ku guuleystay doorashada. Wuxuu aad ugu nuglaa ilaalinta dhaqanka iyo akhlaaqda Islaamiga in lagu ...